Networking အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို ့ပါ — MYSTERY ZILLION
Networking အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို ့ပါ
February 2009 edited May 2009 in Networking
ကျွန်တော်အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို ့ပါ။ ကျွန်တော်တို ့မှာရန်ကုန်ရုံး
ချုပ်ရယ ်မန ္တလေးရုံးခွဲရယ်ရှိပါတယ်။ မန ္တလေးက ဒေတာတွေကို နေ ့စဉ်ရန်ကုန်ကိုပို ့ပေးရ
ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အရင်တုန်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်..
ကျွန်တော်တစ်ခုကျန်သွားတယ်..ရန်ကုန် bagan ISP မှာ ဆာဗာတစ်ခုထားပါတယ်..
အဲဒီ ဆာဗာကိုလှမ်းပို ့ပေးတာပါ။ FTP ကိုသုံးပြီးပို ့ပေးတာပါ။ ကျွန်တော့တို ့လို မျိုးပဲ ဒေတာ
ပို ့ပေးနေတဲ့ ရုံးခွဲတစ်ခုရှိပါသေးတယ်..သူတို ့ကတော့အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်..FTP ကနေ
ပေမယ့်လည်းလုံး၀တော့မဟုတ်ပါဘူးвЂ¦မနက်စောစောတို ့ည ၉ နာရီတို ့လောက်ဆို မြင်ရ
တယ်။ Bandwidth Speed က 256 ယူထားတာပါвЂ¦Internet သုံးတာလည်းနည်းပါတယ်вЂ¦.
ကျွန်တော့ တို ့က Bagan က ADSL ကော၊ MPT က iPstar ကော နှစ်မျိုးလုံးယူထားပါတယ်
ဆာဗာကတော့ Bagan မှာပဲထားတာပါвЂ¦.
ကျွန်တော်တို ့က Bagan က လိုင်းကော၊ iPstar ကလိုင်းကော ကို Router တစ်ခုထဲမှာထည့်ု
ထားပြီး Dual Wan အနေနဲ ့Router တစ်ခုထဲကပဲထွက်ပါတယ်вЂ¦
Router ကမှ Switch နဲခံပြီးသုံးတာပါвЂ¦Connection ကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ကျွန်တော်တို ့ရုံးမှာ စက်ကအလုံး ၄၀ လောက်ရှိပါတယ်..Domain Setting ချပြီးသုံးတာပါ။
Mail Server လည်းထားပါတယ်။ Mail ပို ့ရတာလည်းအရမ်းခက်ပါတယ်вЂ¦
Exchange Mail ကတော့ရပါတယ်..ရန်ကုန်ကိုMail ပို ့ရင်မရတာပါвЂ¦
Internet ကတော့ကြည့်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်..လူလေးငါးယောက်ပဲကြည့်လို ့ရတာပါ
ဒါကြောင့် Connection ကတော့ကောင်းသင့်တယ်လို ့ထင်ပါတယ်вЂ¦.
Virus တွေဘာတွေနဲ ့ကောဆိုင်နိုင်ပါသလားвЂ¦Bagan ကိုဖုန်းဆက်မေးတော့ Virus ကြောင့်
ဖြစ်နိုင်တယ်လို ့ပြောပါတယ်..ကျွန်တော်တို ့စက်တွေထဲ ကတစ်လုံးလုံးက Virus က Loading
တွေတအားလုပ်နေပြီး Connection လေးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို ့ပြောပါတယ်.
ဟုတ်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကောဘယ် စက်က Virus ဖြန် ့နေတာလဲသိအောင်
Router က Manage လုပ်ရတာများလို ့ကြာလို ့ဟန်းသွားတာကောဖြစ်နိုင်လား
ဘယ်လို ဆော့၀ဲတွေကိုသုံးပြီး ပိုမြန်လာအောင်လုပ်ရပါမလဲвЂ¦
ညတိုင်း ၉ နာရီကျော်မှပြန်နေရလို ့ပါ..ကူညီပေးကြပါနော်вЂ¦..:((:((:((:((
Proxy Server ဘာ သုံးလဲခင်ဗျ။ ISA ပဲလား။
အင်တာနက်ကို သုံးလေးယောက်လောက်ပဲပေးသုံးတယ်ဆိုတော့ Proxy Server ကနေ ထိန်းထားတာထင်တယ်။ ဟုတ်လားခင်ဗျ။
Firewall များ ဘာများ ခံထားပါသေးလား။ Network Diagram လေး သေချာလေး ဆွဲ ပြပေးပါလားခင်ဗျာ။
အခု မနက်နဲ့ ည က မြန်တယ်ဆိုတော့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ နေ့လည် ရုံးချိန်အတွင်း ပုံမှန် နှေးနေကျဆိုတော့လေ။
virus လေး ဘာလေး သတ်ကြည့်ဘူးလား ဟင်။
မဟုတ်ရင်တော ့ကွန်နက်ရှင် ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကိုတို ့ဆီမှာ....စက်တွေကို....24 နာရီ ဖွင့်ထားသလားခင်ဗျ...?
အကို kav8.0.0.506en ဆိုလေး သုံးကြည် ့နိုင်ပါတယ်....:):):)
Can you upload your ping summary for site to site?
Check is there any intermittent connection between your2sites.
Do you use BGP migration for both PE links ?
It seem like you are using for redundancy link.
Which router are you using? Is it possible to upload your configuration summary? For ( switchover or failover ) ?
I like to suggest you to use separate email servers for both sites. 1 smart host.
One thing I am not clear about it , which site having issue for this.
Hopefully I can helpabit .. Thx bro
datthagheeri wrote: »
ပေမယ့်လည်းလုံး၀တော့မဟုတ်ပါဘူး…မနက်စောစောတို ့ည ၉ နာရီတို ့လောက်ဆို မြင်ရ
တယ်။ Bandwidth Speed က 256 ယူထားတာပါ…Internet သုံးတာလည်းနည်းပါတယ်….
ဆာဗာကတော့ Bagan မှာပဲထားတာပါ….
ထားပြီး Dual Wan အနေနဲ ့Router တစ်ခုထဲကပဲထွက်ပါတယ်…
Router ကမှ Switch နဲခံပြီးသုံးတာပါ…Connection ကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Mail Server လည်းထားပါတယ်။ Mail ပို ့ရတာလည်းအရမ်းခက်ပါတယ်…
Exchange Mail ကတော့ရပါတယ်..ရန်ကုန်ကိုMail ပို ့ရင်မရတာပါ…
ဒါကြောင့် Connection ကတော့ကောင်းသင့်တယ်လို ့ထင်ပါတယ်….
Virus တွေဘာတွေနဲ ့ကောဆိုင်နိုင်ပါသလား…Bagan ကိုဖုန်းဆက်မေးတော့ Virus ကြောင့်
ဘယ်လို ဆော့၀ဲတွေကိုသုံးပြီး ပိုမြန်လာအောင်လုပ်ရပါမလဲ…
ညတိုင်း ၉ နာရီကျော်မှပြန်နေရလို ့ပါ..ကူညီပေးကြပါနော်…..:((:((:((:((
၁။ အင်တာနက် လိုင်းနှစ်လိုင်းကို ရောက်တာမှာ ထည့်တာလေးကို တစ်ချက်လောက်ပုံရေးပြပါလား။ ၂။ ဘာ ရောက်တာကိုသုံးတာလဲ ရောက်တာရဲ့ မော်ဒယ်လေးပြောပြပါ။
၃။ ရောက်တာကနေ ဘယ်နှလိုင်းပြန်ထုတ်ထားပြီး။ ဆွစ် ဘယ်နှခုကို သွားသလဲ။
၄။ ဆွစ်တစ်ခုစီမှာ စက်ဘယ်နှလုံးစီ ချိတ်ထားသလဲ။
၅။ နက်၀ါ့ ဘယ်နှခုလုပ်ထားသလဲ။
၆။ ဆာဗာကို ဘာနဲ့ထိုင်ထားသလဲ၊ လင်းနစ်လား ၀င်းဒိုးလား။
ဖြစ်နိုင်ရင် နက်၀ါ့တစ်ခုလုံးကို ပုံကြမ်းလေးရေးပြနိုင်ရင်တော့ အဖြေခန့်မှန်းပေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
bandwidth monitoring software တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့် ဆီ က အ၀င်အထွက် ကို တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါလား
Reply လုပ်တာတော်တော့ကို ကြာသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ...
ပထမဆုံး Virus Scan နဲ ့စစ်ပါတယ်...အရင်ကတော့ Mcafee တင်ထားတာပါ...နောက်ထပ် Macfee ကိုဖြုတ်ပြီး Kaspersky နဲ ့ထပ်စစ်ပါတယ်...
ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ port 445 ကို block လုပ်ပါတယ်...
port 445 က virus တွေပဲသုံးတာလို ့ကြားဖူးလို ့ပါ....
အဲဒါကို block လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ port 445 ကိုသုံးတဲ့ စက်တွေကို Router ရဲ့Log ကနေကြည့်ပြီး Virus Scan သွား run ပေးပါတယ်...
၄ စက်လောက်သုံးနေတာတွေ ့ရပါတယ်။
တတိယကတော့ adsl အတွက်ဖုန်ကြိုးကိုလဲလိုက်ပါတယ်.......
အစ်ကို ပုံမှာ FTP က ipstar နဲ့ချိတ်ပြီး Adsl နဲ့မချိတ်ထားဖူးနော်။
ဒီ paper လေးတွေကို လိုချင်ပါတယ်။ ဒေါင်းတာမရလို့ပါ။ IEEE တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကူညီပေးပါဦး ........။
1. H.Liu-- An Adaptive Genetic Fuzzy Multi-path Routing Protocol for wireless Ad-Hoc Networks
2005, May 23-25
2. X.Zhang--Fuzzy logis QoS Dynamic Source Routing for Mobile Ad-Hoc Networks
2004, Sep 14-16
3. An Entropy-Based Model for Supporting and Evaluating Route Stability in Mobile Ad-Hoc Wireless Networks
ပုံမှာက FTP က ဘာလို့ internet line က မ၀င်ဘဲနှင့် သက်သက် line ဆွဲထားတာလားခင်ဗျား Bagan နှင့်လေ။
- FTP ကြောင်ရင်လဲဖြစ်တတ်ပါသည်။
- ကျွန်တော့် ရုံးမှာလဲ internet line ကြပ်နေရင် FTP မရပါ။ ကျွန်တော့်ရုံးက bandwidth က 512 ပါခင်ဗျား။ red link wimax ပါ။ ကျွန်တော့် ရုံးကတော့ FTP ကို ရုံးမှာဘဲထားပါတယ်ခင်ဗျား။ နယ်ရုံး ၃ ရုံးနှင့်စမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျား။
- mail က bagan mail ကိုပြောတာလားမသိဘူးနော်။ Exchange မှာ internal mail ရော bagan mail ရော setup လုပ်ထားတာလားခင်ဗျား။
- router ကပုံမှာ cisco router သုံးထားတယ်နော်.. cisco router က ကျွန်တော်သိသလောက် ခဏခဏလုပ်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ လုပ်ရင်တော့ ပြသနာရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
64 bytes from 10.230.16.5: icmp_seq=280 ttl=63 time=325 ms
အဲဒါတွေက ဘာကိုပြောထားသလဲ သိချင်လို့ပါ တစ်ခုချင်း ရှင်းပြပေးပါဦး ။
ping ရိုက်လိုက်ရင် TCP suite ထဲက ICMP protocol ကိုသုံးပြီး packet လေးတွေပို့ပါတယ်။ ICMP request လို့ခေါ်ပါတယ်။ Packet size က by default မှာ 64 bytes ရှိပါတယ်။ Packet size ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် define လုပ်လို့ရပါတယ်။ Windows မှာ -l switch ကိုသုံး ပါတယ်။ ကို kaunglay က *nix ပေါ်မှာဆိုတော့ -s သုံးရပါမယ်။ ဒီလိုပါ။
ping -s 500 10.230.16.5
အဲလိုဆိုရင် ပထမ 64 Bytes ဆိုတဲ့နေရာမှာ 508 Bytes ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Size ကြီးလေလေ Reply လုပ်ရတဲ့ဘက်မှာ load များလေလေပါ။
icmp_seq ကတော့ Packet number ပါ။ ဘယ်နခုမြောက် Packet လဲဆိုတာပြတာပါ။ တဖြေးဖြေး တိုးလာပါတယ်။
TTL time to live ကတော့ Hop Count လို့သုံးပါတယ်။ Destination ကိုရောက်ဖို့ Router ဘယ်နလုံးဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကို TTL နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Local LAN ထဲမှာ default TTL က 64 ပါ။ Internet ကိုသွားရင် 245 ပါ။ Router တစ်လုံးဖြတ်တိုင်း 1 ကျပါတယ်။ TTL0ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် Drop ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးက time ကတော့ Reply ပြန်ရဖို့ကြာတဲ့ အချိန်ပါ။ Size ကြီးကြီးနဲ့ ping လုပ်ရင် time ပိုများလာပါလိမ့်မယ်။
ping --help ဆိုပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ ping /? ပေါ့ Windows မှာတော့။
(ဒီ Reply ကိုရိုက်တာ Minutes 20 ကုန်သွားတယ်။ Burglish Burglish)
I would like to discuss about it..Coz I also use like this style of FTP/Exchage...
I mean I set up Exchange server in Yangon head office...And Some branch office use my mail server through Internet Connection.To use it,I have to do port forwarding (SMTP-25,POP3-110) in router. But Problem is that when I connect to HO.I got only with Wi-Max Line (Yangon). We have5Internet Line.But In there,we get only with Wi-Max..Also ADSL Line isn't get to connect Exchange Server. so Only rely on for Wi-Max IP..so Is there anyone who can support the Technical Knowledge?
I am looking forward your reply...
Hello...No one want to help me?
Is there any one who set up WAN connection in Myanmar? I would like to know the Network Design and Structure which is using in UN,NGO(Myanmar)..
I know the one who can help you but also it is not easy on papers, this kind of knowledge is quite serious to explain here because I can't know detail setting of yours.
If you are from Yangon then there will be an IT show in တပ်မတော်ခန်းမ ၁-၅-၀၉
to ၃-၅-၀၉ I hope, go and find Access Spectrum Company Ltd. name is Ko Tin Htoo Khaing he is the best guy in this field and ask him help. He is the one who developed for UNHCR and he knowsalot. He is the boss of that company. OK? He is one of my friend.
Thanks you EiEiYgn...I discussed in this topic because One the guys from there is discussing about FTP...Also I am using like this Network...so that I asked some them to get some information....
Your problem is quite complicated and not easy to solve on this forum posts, need detail configuration to know and havealook of your network setting, then that will help to solve the problem. Therefore no one can tell much about that and not get reply here. For me I can't tell if I don't know detail configuration.
Here isaprogram if you want to test it. It isavery good utility that can use as VPN server over Internet. No need to be an IT geek oravery best network administrator that one is Hamachi that software can get at filehippo
or anywhere. You only need to do is just install at the both end of your office computers Hamachi and then do as the software told you and then you are connected. Connection speed is based on your internet speed.
ROUTER သုံချင်လို့ပါ ။ မော်ဒယ် က DI-624+(D-LINK) ပါ။ ကျွန်တော် link လုပ်နေတာ ရတော့ရပါတယ်။
icmp_seq=1996 ttl=254 time=90.8 အဲဒီမှာ 254 ဆိုတာကရော ဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး.. ထပ်ပြီး ရှင်းပြပေးပါအုန်း..
I will tell you about my Network Design...
I took the Internets Line from ISP (Myanmar)
And I set up the Microsoft Exchange Server/FTP server in Head Office and All branch office around the Myanmar connect to the Head office to use Exchange server for mail and FTP server for File transfer...OK
OK To connect to the Exchange server from Head Office, we have to configure port forwarding in router....
SMTP----25----185.*.*.* (our Local IP) Mail server IP
PoP3----110----185.*.*.* (our Local IP) Mail Server IP
To use our Mail server from outside (branch office)...
In the Microsoft Outlook...
Incoming Mail Server IP.....Wi-Max IP ( Wi-Max IP per one week )
Outgoing Mail Server IP----Wi-Max IP
so brach office have change in every Monday to use Mail...
We put Wi-Max IP in out look because I configure port forwarding for Wi-Max Line...
Now problem is start...
In Myanmar, we can't connect MPT and Bagan...So that To use mai,all brach must have Wi-Max Line....It is the main problem....Really It should not be like this...If we have Internet Line,we can connect from everywhere...but now No connection from Wi-Max to ADSL(bagan)...
But there is connection from ADSL(bagan) to Wi-Max.....so how is it?
I really don't understand the Problem....And sometime..Wi-Max Line is not stable...Sending is ok...But Receving Error...And sometime...send and receive are ok...
SO Pls give me some advice.And I also don't know where shoul I have to complain in ISP? whom must we have to complain? Pls advice me
Ok I am looking forward your reply
I saw one new boy who are from UNICEF in Myanmar. So Can I know how the UNICEF connect all branches office around the Myanmar.